Allgedo.com » 2012 » May » 07
Home » Archive Daily May 7th, 2012 Gudoomiyaha Qurba Joogta Beesha Maxamed Amaareer “Wagradhac” oo isku soo sharaxay xildhibaanimada beesha. May 7, 2012 Cali Jaamac Maxamed oo ah Guddoomiyaha Qurbajoogta beesha Maxamed Amaareer (Wagardhac) oo isku soo sharaxay xildhibaanada beesha uu Wagardhaceed oo wax laga weydiiyay sababta xiligaan kala guurka ah uu ugu dhawaaqay in uu u sharaxan yahay “Xildhibaan” ayaa waxuu yiri “kadib markaan arkay kala daadsanaanta iyo dayaca baahsan ee ku habsatay ummuda Somaaliyeed. Markaan arkey dhibaatooyinka... Diplomatic brawl breaks out at Somali embassy in Zambia May 7, 2012 A brawl broke out at the Somali embassy in the Zambian capital Lusaka after the East African country apparently sent a new ambassador to take over without recalling the incumbent, according to reports.
Somalia’s President Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Photo: AP
Sources at Zambian police headquarters said they were summoned to the embassy on Friday morning ... Beesha Maxamed Amaan-reer (wagardhac) oo u soo gudbisay Gudiga qaban qaabada Doorashada Soo socda liiska Xildhibaan oga mid noqonaya Dowlada Soo socota. May 7, 2012 Ku: Gudiga Qabanqaabada Doorashada, Xilidhibaanada Sioomaaliyeed ee xiliga kala guurka, iyo Cida ay qusayso Arintaan.
Ujeedo: Soo gudbin Xildhibaan Dr. Bashiir C/raxmaan Xaaji Gurxan (Daqare)
Anagoo ah beesha maxamed Amaanreer (Wagardhac) oo degan gbolada dhexe ee Soomaaliya waxaan cod buuxa ku aqbalnay in uu doorashada xildhibaanka magaciisu kor kuxusan yahay ee dowlada Soomaaliyeed ee soo socota... Warar dheeri ah oo la xariira Qurbajoogtii iyo oday dhaqameedyadii loo diiday in ay ka dhoofaan Mandheera. May 7, 2012 Mandheera, Kenya (AOL) – Kaddib markii Isniintii shalay loo diiday in ay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha Mandheera rag isugu jira Qurbajoog iyo oday dhaqameedyo kasoo jeeda beesha Sade ayaa waxaa iminka soo baxaya tafaasiil dheeri ah oo la xariirta sababta ragaas looga hor-istaagay in ay Mandheera ka dhoofaan.
Markii ay ciidamada Kenya u diideen in ay Mandheera ka dhoofaan qurbajoogta iyo oday... Radio Allgedo/ Waraysiyo